Maxkamadda ICJ oo dib u dhigtay dhageysiga kiiska Soomaaliya iyo Kenya. - NorSom News
Maxkamadda ICJ oo dib u dhigtay dhageysiga kiiska Soomaaliya iyo Kenya.
Maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ayaa dib u dhigtay dhageysiga dacwada kiiska badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya, oo qorshuhu ahaa in la qabto 9-ka illaa 13-ka bishan September.
Si kastaba, maxkamadda ayaan aqbalin codsigii Kenya ee ahaa in kiiska dib loo dhigo muddo 12 bilood ah, waxaana hadda laga doonayaa inay maxkamadda hor-timaado bisha November.
Inkasta oo Soomaaliya ay dooneysay inaan kiiska dib loo dhigan, haddana dib u dhigista muddada labada bilood ah, ayaa loo arkaa guul ay Soomaaliya gaartay, sababtoo ah waxaa la rumeysan yahay in Kenya aysan daacad ka ahayn dib u dhigista iyo cudur-daarkeeda.
Waxaa muuqata inay yar tahay waxa ay Kenya ku sameyn karto laba bilood gudahood, taasi oo weli ah rajo siineysa Soomaaliya.
Previous articlePer Sandberg: Gacanta ma ahan qaabka kali ah ee la isku salaamo.
Next articleCiyaaryahan Norway ka ciyaaro oo kamid ah xulkii shaley ka badiyay Zimbabwi